दिनदिन तरकारीको मूल्य बढेका बेला टमाटरको आजको भाउ कति छ ? « Etajakhabar
दिनदिन तरकारीको मूल्य बढेका बेला टमाटरको आजको भाउ कति छ ?
काठमाडौं, ९ असार:
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आजका लागि तरकारीको भाउ निर्धारण गरेको छ ।
आज ठूलो भारतीय गोलभेँडाको मूल्य ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । तर, लोकल सानो गोलभेँडाको मूल्य २४ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
यस्तैगरी टनेलको सानो गोलभेँडाको मूल्य भने ३४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तैगरी रातो आलु ४६ रुपैयाँ पर्दछ भने रातो आलु मुडेको ३६ रुपैयाँ रहेो छ । सेतो आलु ३५ रुपैयाँ रहेको छ । कालीमाटी फलफूलत तथा तरकारी विकास समितिले आज दिएको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य विवरण हो ।
बाहिर बजारमा यसको खुद्रा मूल्य फरक पर्न सक्छ । लोकल बन्दा ७० रुपैयाँ रहेको छ भने स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ पर्दछ । यस्तैगरी तने बोडी ४०, घिउसिमी ५०, लाम्चो भन्टा १८, घिरौंला ५० रुपैँया , स्कुस ५०, रुपैयाँ रहेको छ । यो न्युनतम मूल्य हो । अधिकतम अझै फरक पर्न सक्छ ।